Yan Aung: စာတိုက်သို့ခြေလှမ်းသုံးထောင်...
ရင်ထဲမှာ တစ်ခုခု ကျန်သွားတယ်
ခင်ဗျားအစ်ကိုက ခင်ဗျားကို အတော်ချစ်တာပဲ...။ ဂရုစိုက်ပါဗျာ...။
khin myat said...
I feel sad for something after reading your this post.
I envy you who can show your younger life feeling.
I feel sad after reading this post.
I envy you who have ability to show your feeling about younger life.
I really envy you, brother yanag ..
Really wanna pray for both of you,
BE Happy along the life...
Your post makes me cry. I used to haveabrother like yours. Not all people are fortunate like u.
Lesson for me is We have to love and cheerish things we have in our hands, We have to say and express that we love them, we appreciate them. U ralucky man, Ko Yan Aung.
ဖတ်ခါစမှာ ၀တ္ထုတစ်ပုဒ်လိုိ့ထင်လိုက်တယ် … အားလုံးဖတ်ပြီးသွားတော့ လူငယ်တစ်ယောက်ရဲ့ ငယ်ဘ၀ဒိုင်ယာရီ လို့နားလည်လိုက်တယ် …။
scan ဖတ်ထားတဲ့ ကဒ် နဲ့စာသားတွေ တွေ့ ရတော့ ( အော်.. ကိုရန်အောင်ရဲ့ ငယ်ဘ၀ကိုး…)
အစ်ကို တစ်ယောက်ရဲ့ မေတ္တာတွေကို အပြည့်အ၀ ခံစားခဲ့ရတဲ့ … ကိုရန်အောင်ကို မနာလို ဖြစ်လာတယ်..။ လေးမက အစ်ကို သိပ်လိုချင်ခဲ့တာလေ …။ ဒါပေမယ့် လေးမ မှာလည်း လေးမကို သိပ်ချစ်တဲ့ မမ ရှိပါတယ် …။
စာတိုက်သွားပြီး ပြီလို့ထင်ပါတယ်…။ မသွားရသေးရင် မြန်မြန်သာသွားလိုက်ပါ …။ တစ်ခါမှ မကြားဖူးတဲ့ ညီလေး သီချင်းကို လည်း နားထောင်သွားတယ်…။
ဒါနဲ့ ညီလေး … ခုချိန်မှာရော .. ဂေါ်ကြီး ဂေါ်လီကို ကွဲ အောင် ရိုက်နိုင်ပြီလား…။
Hmm…Nice writing…Makes me to think back my childhood days when my family was in Shan state and I have to smile….Crazy isn’t it…. Well, I wasapretty well behaved kid back then (-: But one of my sisters wasayoung trouble maker so I remember I had to fight with the other kids to protect and save her (-:
ဒီလို ကိုယ့်ညီကို ချစ်တဲ့ အကိုမျိုး ရှိတာ နည်းတဲ့ ကုသိုလ် မဟုတ်ဘူးနော်။ အားကျစရာပါပဲ။ မေ တောင် မောင်နှမထဲမှာ အငယ်လုပ်ချင်လို့ အမေကသိလို့လားမသိ။ ခုထိ အကြီးနေရာချည့်ပဲ....အဟဲ